15 Shahaadooyinka Lacag bixinta ee 2017 | ITS
In la xaqiijiyo waa qaab hab-dhaqameedka loogu talagalay xirfadaada xirfaddaada IT-ga. Iyadoo aan loo eegin haddii aad u shaqeyneyso shirkad, hanti gaar ah, adeegyo daaweyn, dawlad ama meel kasta oo kale oo ka faa'iideysata takhasuska IT, xulashadaada ugu sarreysa ee guulaha xirfadeed waa inaad oggolaato awoodaada iyo macluumaadkaaga iyadoo loo marayo shakhsiyaadka si ula-kac ah loo kala qeybiyay shahaadooyinka.
15 Shahaadooyinka Lacag-bixinta ugu Sarreeya
CRISC: Shahaadada Hubinta Khatarta iyo Xakamaynta Nidaamyada Macluumaadka
CISM: Maamulaha Amniga Macluumaadka Shahaadada
CCP-V: Citrix Certified Professional - Dhaqangelinta
CISSP: Macluumaadka Aqoonsiga Nidaamka Nabadgalyada Nidaamyada
CISA: Hantidhowrka Nidaamka Warfaafinta
CCDA: Associate Design Cisco Certified
CCDP: Cisco Certified Professional Professional
PMP: Maareynta Maareynta Mashruuca
MCSE: Mashiinka Nidaamyada Sameeyey ee Microsoft
CCNA: Associate Network Certified Network
MCSA: Iskaashatooyinka Sameeya Shahaadooyinka Microsoft
Qayb kale oo muhiim ah oo tixraac ah waa magdhowga sanadlaha ah ee la siinayo qof kasta oo garsoore ah oo haya kalsooni gaar ah. Dhawr shahaadooyin ah ayaa leh hanti tababar oo dheeraad ah si ay u qaataan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo diyaariyo oo loo qorsheeyo imtixaanka oo ay mid waliba u hesho. Waa kuwan burburka:
Iyadoo loo eegayo Xogta Nidaamka Baaritaanka iyo Xakameynta Macluumaadka, Aqoonsiga CRISC wuxuu xaqiijiyaa in hanti-haystuhu uu ku fiican yahay khataraha nidaamyada xogta iyo dejinta / fulinta xalalka. Xaqiijiyaha CRICC wuxuu leeyahay mushaar caadi ah oo ah $ 119,227 / sanad.
Xaqiijinta CISM waxay u aragtaa awoodda maareynta amniga xogta, sida qof u xakameynaya, naqshadeynaya iyo qiimeynaya ammaanka xogta ee ku xirnaansho. Sida lagu caddeeyey Warbixinta Xirfadaha iyo Mushaaraadka, dadka haysta caddayntan waxay kasbadeen $ 118,348 / sannadkii caadiga ah.
Caddaynta 97,038 / sanadka ee sanadkiiba, Kalfadhiintan CCNP waxay faa'iido u leedahay qof aan qabin wax ka yar hal sano oo khibrad maamul ah oo hubaal ah in hanti qaadaha CCNP uu sii wadi karo oo fulin karo qorshe ballaadhan oo dhul-beereed ah iyo inuu la shaqeeyo mulkiilaha xalka.
Aqoonsiga ITIL v3 - Master ITIL - Sanadka caadiga ah ee mushaar bixiyeyaasha ITIL Master ayaa ah $ 95,434 / sanad. Shahaadada Master-ka waxay u baahan tahay shahaadada aqooneed ee ITIL oo ay u aragto dadka isticmaali kara fikradaha ITIL fikradaha qiimaha IT-da ee xaaladaha dhabta ah.
Sida lagu muujiyey guud ahaan, sanqadhiyadu waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee kordhinta kharajka ganacsiga ee 2017. Mushaharka sanadlaha ah ee loogu talagalay dadka haysta aqoonsiga CCP-V waa $ 102,138. Tani waxay ka tarjumeysaa xiisaha ay u hayaan takhasuska leh Citrix Certified Professional - Xaqiijinta Sanadka
Tirada 3 ee khatarta ugu weyn ee shahaadada bixinta waa shahaadada Aqoonsiga Nidaamka Nabadgalyada Nabadgelyada ama ka (ISC) 2. Shahaadooyinkan waxay u arkaan awoodda maaraynta amniga iyo khatarta, iyo sidoo kale ammaanka barnaamijka horumarinta. Caymiska sanadkiiba ee lagu dhawaaqay ee haysta caddaytani waxay ahayd $ 110,603 / sanad.
CISA waxay damaanad qaadaysaa in imtixaanaadka warfaafinta ee nidaamyada macluumaadku ay yihiin kuwo muhiim u ah qiimeynta nidaamyada oo ay qaataan habraacyada soo socda si loo "xoojiyo kalsoonida iyo kalsoonida nidaamka xogta". Mushaharka caadiga ah ee xirfadlaha halkan wuxuu ahaa $ 106,181 / sanad.
Kusaabsan xeeladdan waa CCDA, xaqiijinta Cisco ee naqshadeynta nidaamka. Waxaa intaa dheer damaanad qaadaya in laguu xaqiijiyo xaqiijinta Cisco kale, tusaale ahaan, CCNP Routing and Switching, maadaama ay lagama maarmaan tahay CCDA. Mushaharka caadiga ah ee haysta CCDA haysta waa $ 99,701 / sanad.
Dadka haysta CCDP waxay helayaan lacag caadi ah oo ah $ 105,088 / sanad. Aqoon-xirfadeedka heer-xirfadeedka ah waxaa loo soo jeedinayaa dhismayaal heer sare ah oo u baahan in la naqshadeeyo nidaamyada hababka isdaba-joogga ah iyo maamulada.
Mashruuca Maareynta Maareynta Mihnadlaha waxaa laga yaabaa in laga yaabo in ganacsigii ugu weynaa ee loo aqoonsaday in loo aqoonsado qoraallada mashruuca. Waa caddeyn caalami ah oo dhan iyo sida Mashruuca Maareynta Maareynta Mashruuca ee Machadka Maareynta Maareynta Miisaaniyadda: Mushaharka sanadka ee caadiga ah ee haysta waa $ 116,094 / sanad.
Microsoft ayaa bedeshay habka MCSE (hadda joogitaanka Qalodhka Sayniska Sare ee Microsoft) si ay u ahaato in badan oo ah xaqiijin xadidan oo xoogga saaraya sidii loo hirgelin lahaa cusboonaysiinta cusub ee noocyo badan oo kala duwan oo ah halkii ay ka mid noqon lahayd mid ka mid ah xoojinta kontaroolka khaaska ah. Gunnada caadiga ah ee loogu talagalay waa $ 96,215 / sanad.
Cisco Certified Network Network (CCNA) waxay heleen lacag caadi ah oo ah $ 107,045, jaan-gooyo CCNA ah ayaa lagu soo bandhigay 2012 waxayna xoogga saartey horumarinta, tusaale ahaan, kaydinta, abaabulidda, qaabaynta, nidaamka diiwaangelinta iyo nidaamka nidaamka.
Xaqiijinta MCSA waxaa loo maleynayaa in uu yahay kal-fadhiga IT-ga ee alaabooyinka kala duwan ee Microsoft waxaana loo kala saari karaa awoodo badan, tusaale ahaan, Desktop, Server, Database, iyo Developer. Qofka tartanka leh oo aan la mid aheyn khibrad hal sano ah ayaa heli doona $ 50,649, tanina waxay kordhin doontaa $ 75,850 oo leh 10 sannado badan oo waayo-aragnimo ah ama aad u badan.
Citrix Certified Associate - Networking (CCA-N) ee loo yaqaan 'CCA-N' waxaa loogu talagalay in lagu ansixiyo kartida iyo barashada la filayo in lagu maareeyo bay'adaha ganacsiga ee ku lug leh NetScaler Gateway si ay u helaan fursad fog oo la xidhiidha miisaaniyada, xogta iyo codsiyada. Iyada oo ku xiran ka qaybgalka shahaadada, wakiil oo haysta aqoonsigaan wuxuu ku guuleysan karaa $ 43,000 sannadkii.